Alaab-soosaarayaasha Soosaarayaasha dareeraha ah ee Sanjabiil, Soosaarayaal ka socda Bolise
Soosaarida Dareeraha Fresh Sanjabiil
[Isha Botanical] Zingiber officinale
Xididka [Qaybta la adeegsaday]
[Muuqaalka] dareere saliideed oo mugdi ah
Antioxidants iyo nafaqooyinka kale ee laga soosaaray sinjibiisha ayaa laga yaabaa inay ka hortagaan ama daaweeyaan arthritis-ka, caabuq, iyo noocyo kala duwan oo infekshan ah. Baarayaasha ayaa sidoo kale darsay awooddiisa si loo yareeyo halista cudurka macaanka, kansarka, iyo dhibaatooyinka kale ee caafimaad.
Ku saabsan Soosaarida dareeraha cusub ee sanjabiilka
Soosaarida dareeraha cusub ee sanjabiilka waxaa laga soo qaatay xididdada sinjibiisha (Zingiber officinale), taas oo ah ubax ubax leh oo rhizome, xididka sinjibiilka ama sinjibiil, aad loogu isticmaalo dhir udgoon iyo dawo dad. Soosaarka sinjibiil ee Honsea Sunshine waxaa laga helaa dheecaanka supercritical CO2 saarista (SFE-CO2) ee xididdada sinjibiisha ee dhulka ku qalalan. Nidaamkan, oo lagu qaado heerkulka cimilada iyo cadaadiska sare, ayaa awood u siinaya inay ka hortagto luminta carafta iyo nabaad-guurka firfircoonida.